CFM tao Toamasina : Tokony hifanampy amin’ny kere any atsimo isika
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → novembre → 12 → CFM tao Toamasina : Tokony hifanampy amin’ny kere any atsimo isika
Redaction Midi Madagasikara 12 novembre 2020 3 Commentaires
Nanao antso avo ny filoha lefitra ny komitin’ny fampihavanam-pirenena avy eto Toamasina (CFM), Atoa Rasolondraibe Jean Jacques, amin’ny tokony hifanampiantsika Malagasy amin’ny havantsika kere any atsimo. Tsy mifidy ny fanampiana azo atao, fa izay foy rehetra dia azo atolotra avokoa hoy ny CFM, ka haterina eny amin’ny birao rezionaly BNGRC izany fanampiana avy amin’ny vahoaka izany. Efa nahavita ny azy ireto mpikambana amin’ny CFM ireto noho izy ireo mpanentana amin’izao fifanampiantsika Malagasy izao. Ankilan’izany dia nanao antso avo ny mbola hanajana ny fepetra ara-pahasalamana momba ny “coronavirus” izy isan’izany ny fanaovana aro-tava, sy fielanelanana 1m, ary ny fanasana tanana matetika. Tena mbola eto amintsika ny valanaretina covid-19 hoy ny CFM, satria ny herinandro nivalona teo dia isany nahitana tranga ny teto amin’ny faritra atsinanana na telo aza no hita niabo tamin’izany, niisa 19 kosa ny tao amin’ny faritra Alaotra tamin’izay, ary mbola nahitana tranga olona 5 matin’izany covid-19 izany. Ankilan’izay dia nanentana ny mpifidy vaventy hamita ny adidiny amin’ny fifidianana senatera ny 11 desambra ho avy izao ny CFM teto Toamasina. Adidy goavana ho an’ny mpifidy vaventy izany ka mila manefa ny adidiny izy ireo, ary sahy haneho ny heviny amin’izay kandida tiany amin’izany senatera izany. Tsara ny fisian’ny hevitra tsy mitovy satria mariky ny demokrasia izany hoy ny CFM, saingy tsy eken’izy ireo kosa ilay fidongiana tsy mifidy tian’ny sasany atao noho izany mety hiteraka zava-doza eo amin’ny fanaovana politika eto amintsika. Efa nitenin’ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana, ka tsy afaka hanohitra izany intsony ny CFM amin’ny maha-komity ny fampihavanam-pirenena mandala ny lalàna azy ireo.
Ray A 12 novembre 2020 at 14 h 44 min · Edit
Ity dia efa tarazon’ny « Tondrojotra »
( Feuille de route) , izay efa naman’ ny MATY tanteraka – ny lehibe tamin’izany efa lasa ambassadeur ets – taorian’ ny nahalany ny PRM izao (ry Chissano nihaody kely 2019 dia TSY sahy niverina intsony…), sy régime Rajao nanome avantages, karama ets,
tsy fantatra mazava ny missions marina, ny « termes de références », ary indrindra ny Contrôles tokony atao aminy ( RAPPORTS financiers, d’activités, inspection d’État, hoan ‘ny mandray volampanjakana rehetra, contrôle démocratique du Parlement ets).
RATSIMANDISA RICHARD 12 novembre 2020 at 14 h 02 min · Edit
Inona no antony tsy amohanana ty CFM ty izay BUDGETIVORE tsy mitondra tombontsoa na kely aza?????
Ray A 12 novembre 2020 at 7 h 57 min · Edit
Fa inona marina moa ity CFm ity? Toa miteny toa miteny etsy sy eroa, karazanjavatra, mamporisika ny vahoaka, izay EFA SAHIRANA MAFY, hiahy indray ( toan drizareo nanome mi TOTALY 6 millions Ar ? )
ny kere, ary manao fananarana isan karazany ny miseho rehetra ( misolo vaika ny Ffkm izay tsy hita intsony?)